सरकार परिवर्तन भएपनि शेयर बजारमा असर नपर्ने, लगानीकर्ता भन्छन्, "हिजाेको बजार घटाई भावनात्मक मुभमेन्ट मात्रै हाे" - Facebook Khabar
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन बदर गरेसँगै संसद पुनः स्थापना भएको छ।
अदालतले संसद पुनःस्थापना मात्रै गरेन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ।
यससँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अब नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार आज बेलुका सम्ममा नयाँ सरकार बनिसक्नेछ। अहिलेका प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरु पदमुक्त हुने भएका छन्।
सरकार परिवर्तन हुँदा शेयर बजारमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको छ। बजारमैत्री नीति लिने सरकार आँउदा शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ। बजार अनुकुल नीति नलिने सरकार आँउदा बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
शेयर बजारमा अर्थमन्त्री को बन्छ? भन्ने कुराले पनि धेरै असर गर्ने गर्छ। अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शेयर बजारप्रति सकारात्मक देखिन्थे। उनले आफ्नो कार्यकालमा शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै नीति लिएनन्। यसले गर्दा उनी अर्थमन्त्रीबाट हट्ने भएपछि पनि लगानीकर्तामा केहि निराशा छाएको छ।
सरकार परिवर्तन हुँदा तत्कालको लागि केहि असर गर्ने गर्छ। तर, उक्त असर दीर्घकालिन भने हुँदैन। यद्यपी, सरकारमा रहने मन्त्रीले लिने नीतिले भने शेयर बजारमा दीर्घकालिन असर गर्ने गर्छ।
यसअघिका नेकपाकै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शेयरबजार प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दा उनको कार्यकाल भरी नै शेयर बजारले गति लिन सकेन। डा. खतिवडालाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्न नसक्दा बजारले गति लिन नसकाे हाे। तर, उनको कार्यकालपछि आएका नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शेयर बजार मैत्री नीति लिन्छन भन्ने लगानीकर्तामा विश्वास रहेकै कारण उनको कार्यकालमा शेयर बजारले दोस्रो पटक नयाँ रेकर्ड बनायो।
अब कांग्रेसको नेतृत्वमा पुनः नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ। नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्री को बन्छ भन्ने एकिन नभएको कारण समेत अन्यौलता बढेको लगानीकर्ताहरु बताउछन्।
डेमोक्रेटिक नेतृत्व शेयर बजार अनुकुल हुने भएकाले यसपटक पनि लगानीकर्ताहरु आत्तिन नपर्ने लगानीकर्ता नयन बास्तोला बताउछन्। “यसअघि पनि डेमोक्रेटिक नेतृत्व बजार अनुकुल रहेको थियो,” बास्तोलाले भने, “नेतृत्वले लिने नीतिमा खासै फरक पर्दैन, अर्थमन्त्री जो बनेपनि शेयर बजारको लागि सकारात्मक नै हुन्छ।”